အကောင်းဆုံး Open Cell Aluminium Foam ထုတ်လုပ်သူနှင့်စက်ရုံ | Beihai
ဆူညံသံလျှော့ချရေး coefficient NRC＞၀.၇၅၊ မီးကာကွယ်မှုအဆင့် A1 နှင့်ကွဲပြားသောစီးဆင်းမှုခုခံမှုနှင့်အပေါက်တစ်ပေါက်ပါ ၀ င်သောအလူမီနီယံ (အပေါက်မှတဆင့်အချိုး) စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုဖော်ပြချက် & အင်္ဂါရပ်များ
Open-cell လူမီနီယမ်အမြှုပ်သည် ၀.၅ မှ ၁.၀ မီလီမီတာ၊ ချွေးပေါက် ၇၀-၉၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အပေါက် ၅၅-၆၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိသောအလူမီနီယံအမြှုပ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်း၏သတ္တုသွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်အပေါက်များသောကြောင့်အပေါက်ဖောက်ထားသောအလူမီနီယံအမြှေးသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအသံစုပ်ယူမှုနှင့်မီးခုခံနိုင်စွမ်းရှိပြီးဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ရေစိုခံနိုင်ပြီးရှုပ်ထွေးသောအလုပ်အောက်တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာဆူညံသံလျှော့ချပစ္စည်းအဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ အခြေအနေများ။
1. အထူ 7-12mm၊
2. အကြီးဆုံးအရွယ်အစား 1200x600mm
3. သိပ်သည်းဆ 0.2-0.5g/cm3 ။
4. အပေါက်အားဖြင့် ၀.၇-၂.၀ မီလီမီတာ။
အခြေအနေကောင်း၌အလူမီနီယံအမြှုပ် panel ကိုကာကွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုအထပ်သားဖြင့်ထုပ်ပိုး။ သင့်နိုင်ငံသို့ကုန်ပစ္စည်းများအားအမြန်၊ လေကြောင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ပင်လယ်ဖြင့်ဖြစ်စေရွေးချယ်နိုင်သည်။
ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် EXW, FOB, CNF, CIF, DDP စသည်ဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။
ယခင်: ပေါင်းစပ် panel
နောက်တစ်ခု: Translucent Aluminium Foam
Cell Metal Foam ကိုဖွင့်ပါ
Open Cell Metal Foam စျေးနှုန်း
Porous Open Cell Foam ဖြစ်သည်